Excel Kugadzirisa Turu. Excel Kudzorera Software. Gadzirisa Excel Mafaira.
DataNumen Excel Repair ndiro yakanakisisa Excel yekugadzirisa uye yekudzosa chishandiso pasi. Iyo inogona kugadzirisa yakashata Excel xls uye xlsx mafaera uye kudzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro ichideredza kurasikirwa mufaira uori.
4.90 / 5 (kubva 1,500 mavhoti)
Sei DataNumen Excel Repair?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kweiyo Excel yekugadzirisa chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen Excel Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen Excel Repair inoputa kukwikwidza
Kutenda nechishandiso chako, zvinonyatsondibatsira zvizere kugadzirisa yangu yepamusoro faira.
Chigadzirwa chako chakashanda nemazvo.
M.Ss. Mukuru Wemagetsi Injiniya
NorTecnica Injiniya Ltd.
Icho chirongwa chakanakisa. Sorta 'a "hapana-brainer" iyo yandinoda.
Ini ndiri mukomana wedata uye ndinonyatsoshandisa Foxpro pane Excel spreadsheet.
... Verenga zvimwe
Asi hupenyu haufambe kudaro kana uchishanda nevamwe vanhu.
Dai chirongwa chako chisingashande, shamwari yangu neni taidai takashandura bhuku rekushandisa tichishandisa hex kana ASCII faira rekutarisa uye ruoko rwakapepeta iyo bhanari kugadzirisa huori. Iko kudhonza kwakadii kwave.
Zvakanaka izvo hazvina kuitika. Saka ini ndinoti basa rakanaka uye iwe unowana vhoti yangu uye ramangwana PR.
Thanks zvekare. Yakakodzera mari yacho.
DataNumen Excel Repair ndakachengetedza zuva uye ndikadzorera iyo data yandaida kubva kufaira rangu rakaora. Zviri nyore kwazvo kushandisa, zvakashanda chaizvo kune yangu
DataNumen Excel Repair ndakachengetedza zuva uye ndikadzorera iyo data yandaida kubva kufaira rangu rakaora. Zviri nyore kushandisa, zvakashanda chaizvo pane zvandinoda, uye ndinozvikurudzira!
Yakashanda zvakanaka! Mazwi angu ese uye neyangu (pamwe yakanyanyisa kuomarara) data rekuyambuka-rava ikozvino yadzoka! WAITA HAKO!! Munguva yezhizha ndakanga
Yakashanda zvakanaka! Mazwi angu ese uye neyangu (pamwe yakanyanyisa kuomarara) data rekuyambuka-rava ikozvino yadzoka! WAITA HAKO!! Munguva yezhizha ndaive nenguva yemahara yekugadzirisa zvinhu, asi isu isutarKudzokera kuchikoro munguva pfupi uye ndanyanyobatwa nebasa repanyama pane remakomputa, uye NDAKANGA ndisina nguva (kana moyo) yekugara pasi ndokupindazve ZVIREVEDZANA ZANA NEMAPfumbamwe-Pfumbamwe-mazwi ehupenyu, tsananguro uye mareferensi! Ndakanga ndichirwara mudumbu mangu pane tarisiro.
Ndinovimba mune zororo rinoshamisa revhiki, uye vhiki inozorodza uye inonakidza!
Kristi Rankin Mudzidzisi
Iyo yekugadzirisa yeExcel chishandiso chakakwanisa kuburitsa rese runyorwa data kubva kune maviri akashatisa mafaera eExcel anga akavhurika uye achichengetwa pandakanga ndave nePC crash.
Iyo yekugadzirisa yeExcel chishandiso chakakwanisa kuburitsa rese runyorwa dhata kubva kune maviri akashatisa mafaira eExcel anga akavhurika uye achichengetwa pandakanga ndaita PC kuparara. Nekudaro, chishandiso hachikwanise kutora zvese nezvose mafomati (zvakashinga, mavara nezvimwe) lost pamwe neakatenderedza hafu yemafomula (kunyanya akaomesesa akabatanidza machira kuita). Iko kwaigona kuve nematambudziko, chishandiso chinocheka pepa rekushandira riripo mune mamwe machira kuti iwe uzive kwekutarisa kurasikirwa - zano rakanaka. Pakazara mhedzisiro inotyisa sezvo iyo data yaive chikamu chakaomesesa kudzoreredza kubva kune yekutanga sosi. Rimwe remafaira rakanga rakakomberedzwa zvakanyanya zvekuti raisakwanisa kuteedzerwa, kuvhurwa (kana kubviswa!) Nechero chirongwa cheMS! Pakazara chishandiso chakandichengetedza kwakatenderedza vhiki rekushanda. Zvakatora zvisingasviki zuva kuti mafaera adzokere pane zvakajairwa nekudzokorora mafomati kubva kune yakura faira vhezheni uye tarisa tarisa iyo data. Chiziviso chevashandisi, kana chishandiso chichiita kunge chakamira, iva nemoyo murefu, zvakatora rinenge awa rimwe kugadzirisa iyo faira rakaomarara risatitarted kuita anythin
Ndira 1, 2017
Mhinduro Yekutevera Zvakajairika Zvikanganiso uye Matambudziko muExpcel Faira
Iyi faira haisi mune inozivikanwa fomati.
Excel yakawana zvemukati zvisingaverengeki mu "filename.xslx".
filename.xls 'Haigone Kuwanikwa.
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Excel Repair v3.6
Kutsigira kugadzirisa Excel xls, xlw uye xlsx mafaera muExcel vhezheni 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 uye Excel yeHofisi 365 mafomati.
Tsigira mafaera akagadzirwa neExcel yeWindows ne Mac.
Tsigiro yekudzoreredza data reruzhinji mumafaira eExcel.
Tsigiro yekudzosera mafomula, kusanganisira akagovaniswa fomula uye yakarongedzwa-yakapinda fomula.
Tsigiro yekudzoreredza mafomati akajairika uye mafomati etsika emaseru nemafomura.
Tsigiro yekugadzirisa mafaira eExcel pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Kutsigira kugadzirisa batch yeExcel mafaira.
Tsigira kusangana pamwe neWindows Explorer, kuti iwe ugone kugadzirisa xls uye xlsx faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
Tsigiro yekuita Excel kudzoreredza kuburikidza nemirairo yetemu parameter.
kushandisa DataNumen Excel Repair Kudzoreredza Yakaora Excel Mafaira
Kana yako Microsoft Excel .xls, .xlw uye .xlsx mafaira akaora kana kukuvara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye haugone kuvhura zvinobudirira neExcel, unogona kushandisa DataNumen Excel Repair kugadzirisa dambudziko. Inozoongorora faira rakashata uye nekugadzira iyo nyowani isina-kukanganisa faira iwe.
Ongorora: Usati wadzorera chero rakashata kana rakakuvara faira reExcel ne DataNumen Excel RepairNdokumbirawo muvhare chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo faira. Uye ndokumbirawo muvhare Microsoft Excel.
Sarudza iyo yakashata kana yakakuvara faira reExpcel kuti igadziriswe.
Iwe unogona kuisa zita refaira reExcel zvakananga kana tinya iro bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira.
By default, DataNumen Excel Repair ichachengetedza iyo yakamisikidzwa Excel faira mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.xls ye .xls faira uye xxxx_fixed.xlsx ye .xlsx faira, uko xxxx ndiro zita reiyo faira reExcel faira. Semuenzaniso, kune sosi yeExcel faira Damaged.xls, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira richava Damaged_fixed.xls. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Iwe unogona kuisa iyo yakamisikidzwa zita refaira zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo yakamisikidzwa faira.
Baya bhatani, uye DataNumen Excel Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa iyo sosi Excel faira.
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iyo sosi yeExcel faira ichigona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura yakagadziriswa Excel faira neMicrosoft Excel.
DataNumen Excel Repair 3.1 inoburitswa muna Zvita 11, 2020
DataNumen Excel Repair 2.9 inoburitswa munaNovember 2nd, 2020
DataNumen Excel Repair 2.8 inoburitswa muna Gumiguru 16, 2019
DataNumen Excel Repair 2.7 inoburitswa munaGunyana 16th, 2019
Kuvandudza kugadzirisa kushanda.
DataNumen Excel Repair 2.6 inosunungurwa munaJune 8, 2019
Shandisa AI tekinoroji kuongorora iyo faira.
DataNumen Excel Repair 2.4 inoburitswa muna Ndira 21, 2019
Tsigira Excel 2019.
Gadzirisa mamwe mabhuru.
DataNumen Excel Repair 2.3 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 20, 2018
Tsigira Excel 2016 uye Excel yeHofisi 365.
Kuvandudza kudzorerwa kwemafomula.
DataNumen Excel Repair 2.2 inoburitswa muna Zvita 24, 2015
DataNumen Excel Repair 2.1 yakaburitswa munaGunyana 7, 2013
Tsigiro yekudzosera yakagovaniswa fomula uye yakarongeka-yakapinda fomula.
Tsigiro yekudzosera nhamba fomati yemasero.
DataNumen Excel Repair 2.0 inoburitswa muna Chikumi 22, 2013
Tsigira Excel 2007, 2010 uye 2013 mafomati.
Chinja chinongedzo chemushandisi chekushandisa.
DataNumen Excel Repair 1.4 inoburitswa muna Chivabvu 23, 2005
Natsiridza mushandisi interface.
DataNumen Excel Repair 1.2 inoburitswa muna Kukadzi 10, 2004
Tsigiro yekudzosera mafomula.
Kutsigira kudzoreredza mazita epepa.
DataNumen Excel Repair 1.1 inoburitswa munaNovember 5th, 2003
Kuvandudza kumhanya uye kurongeka kweiyo yakanyanya data kudzoreredza.
Ita kuti iro gogi meseji riwedzere kupfupika.
DataNumen Excel Repair 1.0 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 5, 2003
Kutsigira kugadzirisa xls uye xlw mafaera muExcel vhezheni 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003 mafomati.
Tsigira kusangana pamwe neWindows Explorer, kuti iwe ugone kugadzirisa xls faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
Gadzirisa uye dzorera yakaora Microsoft Outlook data mafaera (.pst).
Gadzirisa uye dzosera huori Microsoft Access dhatabhesi (.mdb uye .accdb mafaera)